Siyaasi Jamaal Cali Xuseen Oo Si Farshaxnimo Leh Usoo Dhigay Sheeko Duurxula Oo Murti Badani Ku Lamaantahay | Berberatoday.com
Siyaasi Jamaal Cali Xuseen Oo Si Farshaxnimo Leh Usoo Dhigay Sheeko Duurxula Oo Murti Badani Ku Lamaantahay
Hargeysa(Berberatoday.com)-Halkan hoose ka akhriso Sheekadan duur-xulka ah ee uu bogiisa Facebookga ku soo qorey Siyaasi Jamaal Cali Xuseen:hadaad dulucda sheekada fahamto aday kuu taalaa
“Beri baa waxaa jiray nin Darawal ahaa oo Baabuur weyn Oo uu in badan xoogsanaayey oo uu lahaa, ayaa wadadii uu mari jiray meel fig ama dalacad ahayd, kolka uu figtaa marayo ayuu ninkaa Darawalka ahi ooyi jiray.
Berigii danbe ayaa kirishbooygii ka bartay gaadhiga sida loo kaxeeyo, hadda waa Kirishboygii sanadaha la socday oo uu isagii gaadhigii la wareegay Oo darawal isna ka noqday. Kolkuu baabuurkii kaxeeyey kirishbooygii ayaa figtii darawlkii baray ee uu ku ooyi jiray ayuu isna kolka uu marayo ayeey bahal oohin ah oo tii darawalkii hore ka badani ka timid isna Kirishbooygii imika Darawalnimadda la wareegay.
Dadkii baa Ilaahay yaab u keenay. Kuwii shidhka saarnaa ee la socday ayaa weydiiyey iyagoo ku leh ” waar maxaa kugu dhacay.” Kolkaasuu yidhi: ” Ninkii bahalka i baray( Darawlkii hore) ayaa halkaa kolkuu marayo ooyi jiray.” Dadkii mid ka mid ahaa oo ragga yaqaaanay ayaa yidhi; ” Waar hebeloow Darawalkii hore da’ baa heshay Oo wuu itaal gabaye, adigu sowdigii noo faani jiray maxaa kugu dhacay.” Kolkaasuu intuu yara qoslay yidhi; ” Oo Ma run baad Iga moodeen, sidii uun baan kolkaan dalacadaasi marayo oohini i qabanaysaa, amar Ilaahay!!”.